मेयरका उम्मेदवार चन्द भन्छन् : धनगढीमा असफल भएका र राजनीतिक धरातल नभएकालाई सजिलै हराउछु « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७९, सोमबार ०९:४९
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको सरगर्मी धनगढीमा पनि बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी, व्यापारीक केन्द्रको हव समेत रहेको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीका उम्मेदवारहरु अहिले घर–घरमा पुगेर मतदातालाई भेटेर आफूलाई मत माग्न व्यस्त छन् ।
प्रदेशकै एक्लो उपमहानगरपालिका भएकाले पनि धनगढीले प्राय सबैको ध्यान तानेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट निवर्तमान मेयर समेत रहेका नृपबहादुर वड साझा उम्मेदवारका रुपमा भोट माग्न व्यस्त रहेका बेला प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखिएको नेकपा (एमाले) ले पनि चुनावी अभियानलाई तिव्र बनाएको छ । एमालेबाट मेयरका उम्मेदवार रहेका रणबहादुर चन्द पनि उपमेयरकी प्रत्यासी कन्दकला रानालाईसँगै लिएर घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् ।
हालसम्म कुनै लाभको पदमा नबसेका चन्द कैलालीमा इमानदार र निस्कलंकित नेताको रुपमा सबैमाझ परिचित छन् । त्यसैले पनि उनको उम्मेदवारीलाई पनि अर्थपूर्ण रुपले हेरिएको छ । प्रस्तुत छ, विद्यार्थी राजनीतबाट आएर एमालेको जिल्ला सचिव , उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाली सकेका हाल केन्द्रीय निर्वाचन विभागमा रहेका चन्दसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रीत भएर गरिएको कुराकानी ।
तपाईले किन धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिनु भएको हो ?
धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका हो । जुुन गतिमा यहाँको विकास र व्यवस्थित हुुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । हामीले धनगढीलाई व्यवस्थित नगरको रुपमा स्थापित गरेर मेघा सिटी हुुँदै महानगरपालिकाको अवधारणामा अगाडि बढाउन आवश्यक आधार तयार गर्ने योजना बनाएका छौँ । धनगढी नगरलाई स्वच्छ, सफा, हराभरा बनाएर व्यवस्थित सहरका रुपमा विकास गछौँ ।
प्रदेशकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र धनगढी उपमहानगरपालिकामा पछि मिसिएका साविक फूलबारी, उर्मा लगायतका क्षेत्रहरुमा अझै पनि अपेक्षित काम हुन नसकेकाले समानुुपातिक विकास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, खानेपानी, जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने जस्ता आधारभुुत आवश्यकतालाई पूर्ती गर्नका लागि मेयर पदमा मेरो उम्मेदवारी हो ।
मेयर पदमा निर्वाचित हुनु भयो भने तपाईका प्रमुख तीन वटा प्राथमिकता के हुन्छन ?
प्रमुख भनेको सुुुशासन प्रवद्र्धन नै हो । हामी वडाहरुलाई व्यवस्थित बनाएर संस्थागत विकास गर्दै प्रविधि सुुहाउदो सुचना प्रणालीको विकास गछौँ । साथसाथै हामीले सबै वडामा जनशक्ति पूर्ती गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउछौँ ।
दोस्रो, पार्किङ क्षेत्र विस्तार, सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन, हाट बजार व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत पक्षलाई ध्यानमा राखेर सुन्दर र सफा व्यवस्थित सहरको रुपमा धनगढीको विकास गछौँ । संविधानः नागरिकले पाउनुुपर्ने आधारभुुत सेवा, सुुविधाको ग्यारेन्टी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको पहुुँच अभिबृद्धि गछौँ ।
र तेस्रो भनेको औद्योगिकरणलाई थप विस्तार गरेर आर्थिक बृद्धिदर बढाउने र स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कुरा हाम्रा प्रमुख प्राथमिकता हुनेछन् ।
धनगढीमा सत्तारुढ गठबन्धनले साझा उम्मेदवार अघि सारेका बेला एक्लै मैदानमा हुनुहुुन्छ । तपाईका चुनाव जित्ने आधार के–के हुन्छन् ?
हामीले जित्ने पहिलो आधार भनेको हाम्रो गौरवशाली पार्टी एमालेको संगठन नै हो । संगठन एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको छ । १९ वटै वडा र नगरमा हामीले सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी र विभिन्न क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका व्यक्ति समेटेर टिम बनाएका छौँ ।
कमरेड मनमोहन अधिकारीदेखि कमरेड केपी ओली नेतृत्वका सरकारहरुले गरेका जनपक्षीय कामहरु, राष्ट्रियताका सन्दर्भमा गरेका कामहरुले गर्दा नै एमालेप्रती राष्ट्रव्यापीरुपमा जनलहर बढेको छ । अर्कोतिर अन्य पार्टीले उठाएका भन्दा हाम्रा उम्मेदवार अब्बल भएका कारणले गर्दा धनगढीमा चुनाव जित्ने निश्चित भएको छ ।
०७४ सालमा एक्लाएक्लै लड्दा पनि पार्टीगत रुपमा हेर्दा एमाले तेस्रो भएको थियो तर अहिले प्रमुख तीन दलहरु एकातिर छन्, एमाले एक्लै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा तपाई चुनाव जित्ने निश्चित भएको कसरी देख्नुुहुन्छ ?
होइन, समय सधै एकनासको हुँदैन् । हिजो के थियो ? भन्ने कुरा गौण हो । आज के भएको छ ? भन्ने कुरा प्रधान हो । सोही कारणले अहिले परस्थिति धेरै फरक भएको छ । यो स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले स्वभाविकरुपले यहाँका मतदाताले को व्यक्ति उपर्युक्त छ ? भनेर हेर्छन् । त्यति मात्र होइन को मान्छेले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ ? को मान्छे जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्षम छ ? कसले सुशासन कायम गर्न सक्छ र कसलाई विजयी गराएमा सजिलै सबैको पहुँच पुग्न सक्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन्छन् । त्यो प्राथमिकताका आधारमा अहिले अरु भन्दा नेकपा एमालेले अघि सारेका हामी मेयर, उपमेयर लगायतका वडाध्यक्षहरु अब्बल, सशक्त र समाजमा भिजेका, राजनीतिक दृष्टिकोण र योजना दिनसक्ने भएको हुनाले हामीलाई नगरबासीले मत दिन्छन् । सोही कारण एमालेको जीत सुनिश्चित भएको छ ।
तपाई आफ्नो मुख्य चुनौतीका रुपमा कसलाई देख्नुहुन्छ ?
यहाँ धेरैले भ्रम छर्न हिजो धनगढीबासीले दिएको मतको दुरुपयोग गरेर असफल भइसकेका र कुनै राजनीतिक धरातल नभएका स्वतन्त्र भनिएका उम्मेदवारहरुका बारेमा अनावश्यक हल्ला फैलाएका छन् ।
नेकपा एमालेको शक्ति देखेर निश्चित स्वार्थका पूरा गर्न तथा सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यले भएको गठबन्धनलाई जनताहरुले पत्याएका छैनन् । अहिले धनगढीमा जनताहरुकाबीचमा वडादेखि नगरसम्म एमालेकै उम्मेदवार जिताउने गठबन्धन भएको छ ।
हिजो राजनीतिमा नलागेका मान्छेहरुमा पनि स्वच्छ छवी भएका, विगत लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा काम गरेका व्यक्तिहरुलाई अगाडी बढाउने सोच हामीले पाएका छौँ । त्यसैले हाम्रो प्रतिस्पर्धा न गठबन्धनसँग हुन्छ, न त कहिले राजावादी, राप्रपा हुने त कहिले स्वतन्त्र हुनेहरुसँग नै हुुन्छ ।
तपाईको पार्टीमा आवद्ध बाहेकका नागरिकले तपाईलाई किन मत दिने ?
मैले अघि नै भनिसके, धनगढीको विकास पहिलो र प्रमुख कुरा हो । यहाँका समस्या सामाधान गर्ने कुरा नै मुुख्य विषय हो । त्यसैले विकास गर्न सक्ने, नगरका चुनौतीहरुको सामना गर्न सक्ने, सामाजिक रुपान्तरण गर्नसक्ने क्षमता हाम्रो पार्टीले राख्छ । पार्टीले उठाएका उम्मेदवारले राख्ने भएकाले सबै जनताले विश्वास गरेर मत दिन्छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
तपाईले उम्मेदवारी दिनुभएको मेयर पदमा तपाई किन योग्य हुनुहुन्छ ?
लामो समयदेखि विद्यार्थी जीवनकाल विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववीयुमा काम गर्दै अहिले पार्टीका तल्लो तहका कमिटी हुँदै माथिल्ला कमिटिमा बसेर काम गरेको अनुभव छ भने अहिले पनि गर्दै आइरहेको छुु । हिजोका दिनमा तत्कालीन नगरपालिकाको सर्वदलीय संयन्त्र होस् वा जिल्ला विकास समितिको संयन्त्र होस्, त्यहाँ पनि हामीले कुशलतापूर्वक काम गरेका छौँ ।
त्यो बेला हामी सल्लाहकारको भूमिकामा थियौँ भने अहिले उपमहानगरपालिकाको कार्यकारी भूमिकामा तपाईहरुले निर्वाचित गरेर पठाउनु भएमा विगतदेखि नै यहाँको सम्भावना र चुनौती बुझेकाले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ । यो हिसाबले म मेयर पदमा आफूलाई योग्य ठान्छु ।
तपाईले प्रतिनिधित्व गर्ने धनगढी उपमहानगरपालिकाका कुनै तीन वटा विशेषता के–के हुन् ?
धनगढी नगर भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको उपमहानगरपालिको हो । शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धनगढी प्रदेशको हव हो । त्यसैले धनगढीलाई व्यापारिक केन्द्र, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रको हवका रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका केही नेताले एमाले भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रमुख चुनौतीका रुपमा विश्लेषण गरेको सुनिन्छ । के धनगढीमा एमाले एक जना व्यक्ति भन्दा पनि कमजोर भएको हो ?
त्यो कुरा वाहियात हो र विश्लेषण पनि पूर्णरुपले गलत छ । २०७४ सालमा कांग्रेसका नृपबहादुर वडलाई नगरबाले निर्वाचित गराएर पठाए तर उनले सरकार चलाउन सकेनन्, पूर्ण रुपमा असफल भए ।
त्यो पार्टीका तर्फबाट कुनै अर्को व्यक्ति भए अवस्था फरक पनि हुन सक्थ्यो होला तर जो मान्छे हिजो पाँच वर्षमा फेल भए, कुनै योजना दिन सकेनन्, जनतालाई निराशा बाहेक अरु केही दिन सकेन् । मतको अपमान गर्दै नगरबासीलाई निराश बनाउनेहरुको स्वार्थका लागि गठबन्धन भएपनि फेरी उनैलाई भोट हाल्ने अवस्था छैन ।
अर्कोतिर स्वतन्त्रको कुरा के छ भने उनको न पार्टी छ, न विचार छ, न संगठन छ न त स्थायी सोचविचार छ । किनभने कहिले स्वतन्त्र हुने, कहिले राजावादी, कहिले विवेकशिल हुने देखिएकाले स्थिरता छैन । त्यसैले अहिलेको दलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीमा एकजना व्यक्तिले हाक्छु भन्ने कुरा हावादारी कुरा हो ।
हरेक स्थानीय तहमा कार्यपालिका हुन्छ । कार्यपालिकाका सदस्य हुन्छन् । कार्यपालिकामा बहुुमत भएन भने एउटा व्यक्तिले कसरी काम गर्छ ? प्रदेश र संघीय सरकार हामी अनुुकुुलको हुन्छ । त्यो कारणले गर्दा बाहिर फिजाइएका हल्ला सबै गलत हुन्, मित्था कुुरा गरेर जनतालाई म्रममा राख्ने कुरा हो । लामो समय व्यापार व्यवसाय गर्नुभयो । अहिले एक्कासी बीचमा आएर राजनीति गर्छु भन्ने कुुरा अनावश्यक हो । विगतदेखि राजनीति गर्ने मान्छेले मात्र काम गर्न सक्छ । यी कारण म सजिलै चुनाव जित्छु
अन्तमा आफ्ना मतदातालाई के भन्नुहुुन्छ ?
म धनगढीबासीलाई के आग्रह गर्न चाहान्छुु भने धनगढीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा उत्कृष्ट र नमूना सहरको विकास गर्नका लागि नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजय गराउन आग्रह गर्दछु । हामी तपाईहरुको सेवामा समर्पित छौ, सेवा गर्ने मौका दिनुस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहान्छु ।